XOG LA HELAY: Sirdoon soo ogaaday goobta Al-Shabaab ay ku diyaariyaan qaraxyada miinooyinka, waa halkee? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG LA HELAY: Sirdoon soo ogaaday goobta Al-Shabaab ay ku diyaariyaan qaraxyada...
Nairobi (Halqaran.com) – Sirdoonka waddanka Kenya ayaa soo ogaaday halka maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku sameeyaan Miinooyinka ay qaraxyada uga gaystaan gudaha dalka Kenya.
Warbixin Sirdoon oo loo gudbiyay Booliska dalka Kenya ayaa lagu ogaaday goobta Qaraxyada Miinooyinka Al-Shabaab ay ku diyaariyaan inay tahay Magaalada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe.
Intaasi kaddib Al-Shabaab ayaa Miinooyinka waxa ay ku qaadaan Gaari dameero sida sahay, waxaana ay ku qaybiyaan deegaanka Laanqurac oo ku dhaw xuduuda, halkaasi oo laga gudbiyo Miinooyinka Al-Shabaab ay ku qarxiyaan Gudaha Kenya.
Taliyaha Booliska Dalka Kenya Hillary Mutyambai, ayaa sheegay inay jiraan dad kala duwan oo Al-Shabaab la shaqeeya, kuwaasi oo Miinooyinka ka gudbiya dhanka xuduuda.
Sidoo kale, sirdoonka Kenya ayaa ku soo warramaya in ay heleen in xog ururinta Al- Shabaab ee Gobolka Soomaalida ay aad ugu badan yihiin Haweenka, kana fogaadaan dadka xoola dhaqatada ama beeraleyda ah ee deegaanka.
Saraakiisha ammaanka Kenya ayaa sheegay in Ciidamada Al-Shabaab ee sohdinta ka dagaallama uu hoggaamiyo Cabdullahi Banati, islamarkaana uu leeyahay kooxo kala qeybsan oo qeybtiiba ka kooban tahay 8 ilaa 10 qof.
Kooxdaas ayuu sheegay in inta badan aysan ka fogaan goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan, islamarkaana qayb miinada geliso dhulka kuwana kor ka illaaliyaan si haddii loogu yimaado ay u difaacaan.
Ugu dambeyn, Cabdullahi Banati ayey sheegeen in uu qeyb ku lahaa weerarradii Westgate, Jaamacadda Gaarisa, Dusit D2 iyo weerarkii Bishii October lagu dilay 12 ka mid ah Saraakiisha Booliska Kenya.
goobaha Al Shabaab
qaraxyada ku diyaariyaan